[I-AIRD ALARM]: UMartin Vrijland
ahanjiswe [I-AIRD ALARM], IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-4 Septemba 2017	• 19 Amazwana
I-Stasi yayiyinkimbinkimbi ebaluleke kunazo zonke e-East German ukuhlakanipha nokuphepha kwenkonzo ngesikhathi seCold War, futhi kubonakala sengathi iphumelela kakhulu emhlabeni. I-Stasi yayiyinkonzo eyimfihlo futhi yayithonywa kakhulu yi-KGB yeSoviet Union. Nakuba i-Stasi ku-1990 ngemuva kokuwa kweBall Berlin yayizophakanyiswa ngokusemthethweni, [...]
Inkululeko yokukhuluma, yokukhuluma nokucabanga ingase ingakapheli unyaka
ahanjiswe [I-AIRD ALARM], IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-2 Septemba 2017	• 19 Amazwana
Uma ucabanga ukuthi "Oh, lokho ngeke kuhambe ngokushesha", awuzange unake. Phakamisa emahlombe akho bese ucabanga: "O, awu, khona-ke kancane ukusho ukuthi ucabanga, Angikho umuntu kwakudingeka umbono wami mayelana lutho futhi konke ukuba ngiphane ngakho," [...]
ahanjiswe [I-AIRD ALARM], IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-29 Agasti 2017	• 27 Amazwana
Ukungaqondi kahle okuncane kudinga ukususwa. Lapho ngithi ukuthi uRonald Bernard ngumdlali osebenzisa NLP amasu ukuba babe Ejabulisayo Bank ukukholisa abantu ujoyine indaba ekhanga uzungu theorists, akusho ukuthi ukuhlukumeza ngokocansi kanye umhlatshelo oyisiko of [...]
Ngesikhathi i-intanethi ifika nje kuyo yayihle kakhulu futhi awukwazanga ukulinda isivinini esikhulu futhi ungathola futhi ushintshe ulwazi oluthe xaxa. Phakathi naleso sikhathi, asazi kangcono futhi izizukulwane ezincane isikhathi lapho kungekho khona amafoni omakhalekhukhwini mhlawumbe yisikhathi esidala kakhulu lapho ungathandi khona [...]
Kuyizinsuku zangempela ukuthambekela kwangempela ukukhuluma nge 'matrix'. Esihlokweni sami sokugcina mayelana noMartijn van Staveren, ngichaza ukuthi ama-désinfo agents abheka kanjani njengendlela yokuphepha yokuvusa bese esethumela ihlathi elinamafutha okuthiwa (okuthiwa) nolwazi futhi nethemba lokudweba [...]
Frans Heslinga umhlaba ophazamisa umhlaba ongobuchopho abagula ngengqondo?
ahanjiswe [I-AIRD ALARM], IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-6 Julayi 2016	• 24 Amazwana
Empeleni, kungcono indiva lezi zinhlobo Clowns, kodwa French Heslinga manje olusunduzelwe njengoba abezindaba ehlukile futhi abezindaba neningi, kufanele baphakamise lapha. Kukhona ngokusobala PSYOP entsha (imisebenzi ngokwengqondo) Tactical umkhankaso ukuxhuma Hlobo luni lokucabanga olukhuthazwa ezibucayi imicabango ngendlela yokusangana. I 'flat [...]
Ithiyetha yomhlaba flat, ingenangqondo eyingozi!
ahanjiswe [I-AIRD ALARM], IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-4 Julayi 2016	• 8 Amazwana
Ngesonto eledlule, ngivele ngamaka ngamabomu okuthiwa 'flat-theory theory', ngoba ngokuzumayo kube nenani elikhulu lokuphikisana kusukela ku-2015. Yiqiniso, inkolelo egcwele yemikhosi, okuyinto noma ubani onolwazi oluncane lwesisekelo semathematika ne-physics angathunyelwa ezweni lezinganekwane, kodwa ukuvela kwalokhu 'ukunyakaza' [...]
I-flat Earth noma Flat Earth theory yi-PsyOp ukubeka abacwaningi ngaphansi kweqembu labademani
ahanjiswe [I-AIRD ALARM], IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-29 Juni 2016	• 22 Amazwana
I-intanethi okwamanje iqhuma ngamavidiyo, iziteshi ze-YouTube kanye namabhulogi wewebhu abonakala ngokucophelela ukuthi imidiya ejwayelekile kanye ne-oda elungile ikopela kithi. Lezi zihlaziya ngokuvamile zivela ekucwaningeni okuhle. Okwenzekayo manje, noma kunjalo, ukuthi lezi zindinganiso (ezihlakaniphile kakhulu futhi ezihlanjululwe) zixhunywe "kubacwaningi" abasebenza [...]
Ukuvakasha okuphelele: 2.618.839